Fifidianana anivon’ny OIF : Nanatitra ny taratasy firotsahany ny minisitra Rwandaise -
AccueilSongandinaFifidianana anivon’ny OIF : Nanatitra ny taratasy firotsahany ny minisitra Rwandaise
Fifidianana anivon’ny OIF : Nanatitra ny taratasy firotsahany ny minisitra Rwandaise
Noraisin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampinina izay filohan’ ny OIF amin’ izao fotoana izao teny amin’ ny lapam-panjakana Iavoloha omaly ny minisitry ny Raharaham-bahiny ao Rwanda , Louise Mushikiwabo izay sady tompon’andraikitry ny fiaraha-miasan’ny fiombonan’i Afrika Atsinanana. Niara-dalana tamin’ity minisitry ny Raharaham-bahiny Rwanday ity ireo mpiara-miasa aminy, narahin’ny minisitry ny Raharam-bahiny Malagasy Dovo Eloi. Anton’ny fitsidihan’ i Louise Mushikiwabo ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia noho ny hafatra izay nampitondraina azy avy amin’ ny filohan’i Rwanda Paul Kagamé azy, ity farany izay hiaraha-mahalala satria dia isan’ny mpiara-miasa akaiky amin’ny filoha malagasy noho izy ihany koa filohan’ ny vondron’ny tany miteny Frantsay amin’ izao fotoana izao. « Voalohany dia tonga eto ny tenako hametraka taratasy ofisialy amin’ ny firotsahako ho sekretera jeneraly ny vondrona iraisam-pirenena ny frankofonia, amin’ny anarako manokana » hoy hatrany ity lehiben’ny diplomasia Rwandaise ity. Marihina fa efa nambaran’i Louise Mushikiwabo io firotsahany io nandritra ny fivorian’ny vondrona afrikanina tany Nouakchott, ary neken’ ireo filoham-panjakana sy governemanta tany an-toerana. Marihina fa efa-taona ny taom-piasan’ ny sekretera jeneralin’ny OIF, ary ny fivoriana an-tampon’ny OIF andiany faha- XVIIE izay tontosaina any Armenie amin’ ny volana Oktobra no hanatanterahana ny fifidianana, mandray anjara amin’ izany ireo filoham-panjakana sy governemanta anivon’ny OIF.
Nandritra ny fihaonan’ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina sy ny minisitry ny Raharaham-bahiny avy ao Rwanda Louise Mushikiwabo no nifampidinihan’izy ireo mikasika ny fifanaraham-piaraha- miasa eo amin’ ny firenena roa tonta. « Maro ireo seha-piaraha-miasa izay ho atomboka ato ho ato, indrindra eo amin’ny sehatry ny nomerika, satria tsy ho ela i Madagasikara dia hiditra tanteraka anivon’ny fifidianana, ary mahaliana ny tanoranay ihany koa izany » hoy hatrany ity minisitry ny raharaham-bahiny avy any Rwanda ity. Eo ihany koa ireo sehatra tahaka ny fitanterana an-tanety, satria ny kaompaniam-pitaterana Rwanda Air dia tafiditra anatin’ ny faritr’Afrika Autsale. Tsy adino ihany ireo sehatra an-drenivohitra izay hojerena ato ho ato. “ Hojerena haingana dia haingana avokoa izany rehetra izany, manaraka ny tetiandro efa nofaritana, ary hirosoana avy hatrany ny fiaraha- miasa mazava” hoy izy namarana.
Nametraka fanamby ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ny lahateny nataony nandritra ny fitokanana ny Tobim-piantsoan’ny fiara mpitatitra sy taksiborosy eny Andohatapenaka. Araka izany nanambara ny filohan’ny Repoblika fa efa manova fomba fijery ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana ...Tohiny